Itoobiya, Sudan iyo Masar oo ku heshiiyey biyaha Niil – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Itoobiya, Sudan iyo Masar oo ku heshiiyey biyaha Niil
Mareeg.com: Wadamada Itoobiyam Masar iyo Suudaan ayaa kala saxeexday heshiis hordhac ah oo ku saabsan wadaagga biyaha wabiga Nile (Niilka) oo dalka Itoobiyana looga yaqaano Abaay, kaas oo mara saddexda dalba.
Madaxweynaha Masar Abdel Fatah Al-Sisi, Madaxweynaha Sudan Cumar Xasan Al-Bashiir iyo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalagn ayaa iyagoo wada jir ah oo gacmaha is heysta heshiis ku gaaray magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Sudan.
Heshiiska ayaa imanaya iyadoo Itoobiya dhisayso biyo xireen koronto laga dhalinayo oo ay rajaynayso in ay hoos u dhigto Koronto yarida.
Wadamada ayaa isku afgartay in si caddaalad ah loo isticmaalo biyaha wabiga meeshana laga saaro wax dalka mid ah saddexda dal waxyeelaya iyo in wada-hadal lagu dhameeyo wixii muran ka jira biyaha Niilka.
Saddexda masuul ee dalalkaasi ayaa soo dhaweeyay heshiiskaasi iyaga oo khudbad ka jeediyay magaalada Khartuum oo heshiiskan lagu saxeexay Isniintii shaly.
Ra’isal wasaaraha Ethiopia, Hailemariam Desalegn, ayaa sheegay inaanu wax dhib ah u horseedi doonin biya xireenkaani dhinac ka mid ah saddexda dal.
“Waxaan xaqiijinayaa inaanu biyo xireenka dib u curashadu waxyeelo u gaysan doonin saddexda dal midna, siiba inaanu Masar dhibaato u keeni doonin” ayuu yiri Hailemariam Desalegn.
Xukuumadda Masar waxa ay markii hore muujisay walaac ay ka qabtay biyo xireenkaasi dib u curashada oo ay ku baxayso in kabadan afar bilyan oo doolar.
“Waxaanu dooranay Iskaashi iyo is aaminaad dalba dalka kale ah si aanu horumar u gaadhno, Kani waa heshiis wada shaqayneed, waana la dhamaystiri doonaa” ayuu kulanka ka sheegay Madaxweynaha Masar Cabditafax Al-siisi
Masar waxa ay ka yaabanayd in dhismaha biyo xireenkaasi uu yareeyo biyaha ay ka hesho wabigaasi Niil oo ay cabista iyo beeraha u isticmaasho. Inta badan biyaha laga isticmaalo dalk Masar ayaa waxaa laga helaa webiga Niilka.
Yemen oo codsatay faragelin Iskaashiga Khaliijka